Apple dia afaka tratry ny Spotify amin'ity fahavaratra ity any Etazonia | Avy amin'ny mac aho
Na eo aza ny fampidirana ny Apple Music manerana ny tontolo iainana Apple, maro ireo mpampiasa no manohy matoky an'i Spotify ho serivisy mozika mivantana tiany, nefa tsy mieritreritra akory mifamadiha amin'ny serivisy mozika streaming an'i Apple.
Araka ny ireo tarehimarika ofisialy farany izay nambaran'ny orinasa tsirairay, Spotify dia manana mpanjifa 70 tapitrisa, raha Apple Music kosa mahatratra ny 30 taona. Nefa toa tao an-tranon'i Apple, Etazonia, ny serivisy fandefasana mozika an'i Apple dia mety hihoatra ny isan'ny mpampiasa amin'ny Spotify amin'ity fahavaratra manaraka ity. Izay tsy azo ampiononina, satria tsy tianao izany.
Araka ny The Wall Street Journal, mitanisa loharanom-baovao ao amin'ny indostrian'ny mozika, any Etazonia dia mahazo mpamandrika betsaka any Etazonia ny Apple fa tsy Spotify. Apple Music dia manana fisondrotana 5% isam-bolana raha 2% kosa ny fitomboan'ny Spotify, tarehimarika izay raha tazonina mandra-pahavaratra dia hamela Apple Music dia mahatratra ny serivisy mozika malaza manerantany ankavia.
Ho fanampin'izay, araka ny fanontana dia manana mpanjifa 36 tapitrisa eran'izao tontolo izao ny Apple Music (tarehimarika izay tsy mbola nohamafisin'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy), satria ny tarehimarika ofisialy farany dia Nanambara i Jimmy Iovine tamin'ny septambra lasa teo.
Araka ny efa nolazaiko teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity, izay tsy mampionona ny tenany dia satria tsy tiany. Samy Apple sy Spotify na oviana na oviana, ary hoy aho hoe TSY MISY, dia nitatitra momba ny isan'ny mpamandrika isam-pirenenaEny, ary ankehitriny dia tsy azoko antoka izany. Ny loharanon'ny The Wall Street Journal, mifandraika amin'ny tontolon'ny firaketana, dia tsy mahalala hoe hatraiza no ahafantaran'izy ireo ny fironan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny serivisy mozika mivantana na hafa. Na izany aza, rehefa tsy misy vaovao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia afaka mahatratra ny Spotify amin'ity fahavaratra ity any Etazonia